Uncategorized – Page2– Focus Myanmar
တနာရီကို မိုင် ၂၅၀ နီးပါးသွားနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်မယ့် ကျည်ဆန်ရထားကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မေလ ၁၀ ရက်က စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်။ ၃ နှစ်ကြာ စမ်းသပ်မှုတွေအပြီးမှာတော့ Shinkansen ကျည်ဆန်ရထား မျိုးဆက်သစ် ALFA-X ကို ချပြနိုင်ခဲ့တာပါ။ ကျည်ဆန်ရထားတွေရဲ့ အစပြုရာ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ တနှစ်ထက်တနှစ် အမြန်ဆုံးနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ကျည်ဆန်ရထား တွဲတွေကို စမ်းသပ်လာခဲ့ရာ အခုနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြသခဲ့တဲ့ အမျိုးအစားကတော့ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး စာရင်းဝင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခရီးစဉ်တွေအတွက် အဆိုပါကျည်ဆန်ရထားကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်တော့ နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်လောက်အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှပဲ ပြေးဆွဲနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မျိုးဆက် သစ် ALFA-X ဟာ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသစ်တွေအသုံးပြုပြီး ပြင်ဆင်ထားတာမို့ ယခင်မျိုးဆက်ဟောင်း တွေထက် လိုဏ်ခေါင်းထဲဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ အသံဆူညံမှုလျော့ချထားပြီး ငလျင်ဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ရည် ပိုရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးဖြစ်လာမယ့်...
Categories Uncategorized/ဗဟုသုတ/သတင်း	Comments: 0
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Thaksin Shinawatra နဲ့ အဆက်အစပ်ရှိတဲ့ Pheu ထိုင်းပါတီက မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၁၃၆ နေရာမှာ အနို်င်ရပြီး အများဆုံးအနိုင်ရတဲ့ပါတီဖြစ် တယ်လို့ ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဒီကနေ့ တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ စစ်တပ်က ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ Palang Pracharath ပါတီက ၉၇ နေရာမှာအနိုင်ရပြီး ဒုတိယ လိုက်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဟာ ရလဒ်ထုတ်ပြန်ဖို့ အချိန်ဆွဲထားတယ်။ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ကနဦး မဲရလဒ်တွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး အပြင်းအထန် ဝေဖန်ခံနေရသလို စစ်တပ်ဘက်ကို ယိမ်းတယ်လို့လည်း စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။ ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာ အမတ်နေရာ ၅၀၀ ရှိပြီး ၃၅၀ ကို လူထု တိုက်ရိုက်မဲဆန္ဒနဲ့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက ၃၄၉ နေရာကို ကော်မရှင်က အတည်ပြုထားပြီးပါပြီ။ ကျန်တဲ့အမတ်နေရာ ၁၅၀ ကိုတော့...
မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ဟာ သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ဒီနေ့ မေလ ၇ ရက်နေ့မှာ အကျဉ်းထောင်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်ရဲ့ဖခင် အဆိုတော်အောင်ရင်ကတော့ “ကျနော်တို့မိသားစုရဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကြီးကနေ ဒီနေ့ လွတ်မြောက်ပါပြီခင်ဗျာ၊ လွတ်မြောက်ခွင့် ရရှိဖို့အတွက် သမ္မတကြီးနဲ့တကွ တာဝန်ရှိသူ လူကြီးမင်းများအားလုံး၊ စိတ်ပူပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပေးကြသူများအားလုံး၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားအပြည့်နဲ့ ကျနော်တို့မိသားစုကို စောင့်ရှောက် ဖေးမကူညီကြသူများအားလုံးကိုရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။” လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၉ ရက်က မိုးအောင်ရင်ကို ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ သူ့ ရည်းစား နေအိမ်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကသွားရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှာ အိုက်စ်မူးယစ်ဆေးဝါး ၁ ဂရမ်နဲ့ အတူ ဖမ်းမိခဲ့တာပါ။ ဒီနောက် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တရားရုံးကနေ မူးယစ်​ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်​ကိုပြောင်းလဲ...
Categories Uncategorized/သတင်း/အနုပညာ	Comments: 0
မေလ ၄ ရက်နေ့ကနေ ၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမယ့် ထိုင်းဘုရင် Maha Vajiralongkorn နန်းတက် ဘိသိတ်ခံပွဲအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ အပြီးသတ် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ထိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ နီးပါးအတွင်း ပထမဆုံး နန်းတက်ပွဲအတွက် တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ ဘုရင့်နန်းတော်ရှေ့မှာ တော်ဝင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဝတ်စုံပြည့် ချီတက် အစမ်းလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုင်းဘုရင်ကြီး Bhumibol Adulyadej ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာလမှာ နတ်ရွာစံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ Rama မင်းဆက်ရဲ့ ၁၀ ယောက်မြောက် ဘုရင်အဖြစ် သားတော် Vajiralongkorn က စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်အရ ထီးနန်း အရိုက်အရာကို ဆက်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေလ ၄ ရက်ကနေ ၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမယ့် နန်းတက်ပွဲ အခမ်းအနားတွေအတွက် ထိုင်းအစိုးရက ဒေါ်လာ ၃၁ သန်းလောက်...
မန္တလေးတိုင်း၊ စဥ့်ကူးမြို့နယ်ထဲက ကံတောင်ကျေးရွာမှာ ရှိတဲ့ ရွှေအင်းတစ်ခုမှာ ဧပြီ ၂၇ ရက် က ရုတ်တရက် မြေစာပြိုကျလို့ တရုတ်နိုင်ငံသား သတ္တုတူးဖော်ရေး ပညာရှင်တစ်ယောက် အပါအဝင် လူ ၂ ဦး သေဆုံးပြီး တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ သွားပါတယ်။ အဲဒီ ရွှေအင်းဟာ ထက်ရည်လင်းကုမ္ပဏီ အုပ်စုပိုင် ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ရွှေအင်းထဲကို ဆင်းနေချိန် ပေ ၅၀ ကျော် အရောက်မှာ ရုတ်တရက် ကျောက်သားနဲ့ မြေစာတွေ ပြိုကျလာလို့ လူသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး ကံတောင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစန်းဦးက ပြောပါတယ်။ မြေစာပိတဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း အင်းလုပ်သားတစ်ဦးနဲ့ အတူ တရုတ်နိုင်ငံသား ပညာရှင်ပါ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ စကားပြန် ဖြစ်သူကတော့ ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ လူသေဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရွှေအင်း...